"Izao no mampionona ahy amin’ny fahoriako; ny teninao no mamelona ahy." Salamo 119:50
"Ho mandrakizay, Jehovah ô, no nanorenanao any an-danitra ny teninao." Salamo 119:89
Rehefa mipoitra eo amin’ny solosaina na eo amin’ny finday ireo teny ireo, dia midika izany fa misy olona te hifandray amintsika amin’ny alalan’ny «mailaka» na SMS. Manan-kolazaina amintsika io olona io, ka dia mandefa hafatra. Andriamanitra ihany koa dia manan-kambara amintsika, ka dia namela hafatra ho antsika.
Tia antsika Ilay Andriamanitra Tsitoha, Mpahary izao rehetra izao. Asehony amintsika ao amin’ny zavaboary ny fisiany, ny heriny, ny fahendreny. Hafatra mahatalanjona no ampitain’ny fahariana… Fa miteny amintsika ihany koa Andriamanitra, ao amin’ny Baiboly sy amin’ny alalan’ny Baiboly.
Ao amin’ireo tantaran’ny fiainan’ny mpino Izy dia mampiseho amintsika fa te hifandray amin’ny olona, ary miantso azy ireo hitoky aminy. Ny Baiboly izany dia tsy tantara mahaliana fotsiny, fa fitaomana hihaona amin’Andriamanitra. Rehefa mampiseho amiko ny vavaka ataon’olona mijaly ny Baiboly, dia mitaona ahy hilaza amin’Andriamanitra ny fanahiako. Rehefa asehon’ny Baiboly ireo tsy fahamarinana, dia taominy aho hiaiky ireo tsy fahamarinako. Rehefa tantarainy ny resaka ifanaovan’i Jesosy amin’olona mangirifiry ao amin’ny vatany na ao amin’ny fanahiny, dia asehony ahy ireo ratrako sy ny ahafahako mahazo fanasitranana avy amin’i Kristy. Rehefa resahiny ny nahafatesan’i Jesosy sy ny nitsanganany tamin’ny maty, dia sokafany ho ahy ny lalana mankany amin’ny fiainana mandrakizay.
Ao amin’ny Baiboly Andriamanitra dia milaza fa tia antsika, ary mampahatsiahy ny fomba nanaporofoany izany: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:16).